Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Waxaa Mudan In La Taageero Baaqa Iyo Dadaalka Cusub Ee Prof. Mohamed Sheikh Osman Jawaari. By: Abdulkadir Abukar Sheikh , Sweden Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Waxaa Mudan In La Taageero Baaqa Iyo Dadaalka Cusub Ee Prof. Mohamed Sheikh Osman Jawaari. By: Abdulkadir Abukar Sheikh , Sweden
Waxaa dhowrkii todobaad ee ugu dambeey ku qulqulayay magaalada Baydhabo ee caasimadda koonfur glabeed, siyaasiyiin ka tirsan golaha Baarlamanka Federalka ee ka soo jeeda beelaha DM. Inta badan Xildhibaanadaas DM ayaa waxay noqdeen kuwo si aad ah ugu kala duwan dhanka fikirka arimaha ku saabsan mustaqbalka maamulka koonfur galbeed. Waxaase xusid mudan in bishii maarso 3, 2014, ay inta badan bulshada koonfurgalbeed ku dhawaaqeen maamul ka kooban lix gobola, kaas oo uu hore bilowgii maamulkaas uu Prof Jawaari u Taageray.
Tan kale, sida caadada ee aanu ku aragnay taarikhda beelaha DM ay ahydba, ka dib markii lagu dhawaaqay mamuulkA lixda ee KG, waxaa soo baxay koox kale oo taageero ka haysto Dowladda Federalka iyo UNSOM, ay ku dhawaaqeen maamul kale oo seddex gobol ka koobab. Waxa kaloo ka dambeyey kuwo kale oo maamul labo gobol ah ku dhawaaqay. Maamuladaas oo ku noqday caqabad dhammaan horumarikii iyo rajdadii ay bulshada koonfur galbeed ay hore ugu sii socon laheyd. Arintu waxay noqotay, Ijiiid aan ku jiidee, waa gacmo daalis.
Dhibaatooyinkaas waxa ay u horseeday in ay bulshada koonfur galbeed ay iyaga dhexdhooda ay is lug gooyso oo aan qof kale lagu eedeyn karin. Arimahaas waxay noqotay siyaasad, lagu minjixaabinaayo, in ay bulshada koonfur galbeed ay yeelato hogaamiye iyo siyaaad hal meel ka soo wada jeeda, kaas oo lagu badbadiyo dhibaatada dhinac kasto ku hadbsatay reer KG tan iyo burburkii dowladde dhexe 1991 iyo maanta aan joogno dhamaadka 2014.
Hadaba, khamiistii aan soo dhaafnay oo ku beegnayd 11 September 2014, khudbad qiimo lahayd, oo uu Prof. Mohamed Sheikh Osman Jawaari ka soo jeediyay magaalada Baydhabo, waxa uu ku sheegay runtii arimo badan oo aniga i soo jiitay. Inkastoo Profl Jawaari, waxaa looga bartay inuu wax wanaagsan sheego oo haddana aysan fulin, ayaa dad badab arintaan ka gaabsaday inay si toos ah u taageeraan ama uga hor yimaadan, laakiinse u arkay isku day wanaagsan. Waayo, inta badan, waxaa wanaagsan in hogaamiye kasto oo ka tirsan bulshada in hadalkiisa ama balantiisa uu ka dhabeeyo.
Laakiin aniga weli waxaan aaminsanay, in khudbadii Prof. Jawaari ay aheyd, mid ku dhisneed dareen dhab ah oo yididiilo i geliyey iyo fursad kale, waayo waxyaabaha uu ka hadlay Prof. Jawaari waxaa uu ka hadlay waxyaabo dhab ah ama waaqici ah oo jira kuwaas oo u baahan in hore loo sii mariyo lana taageero: Arimaha uu Prof. Jawaaray uu ka hadaly waxaa ka mid ahaa:
In shacabka koonfur galbeed, gaar ahaan DM meel kasto ay ku dhibaateysan yihiin. Waxa uu Prof. Jawaari khudbadiisa ku sheegay in dhalinyaro badan oo ganacsato ah kana soo jeeeda Digil iyo Mirifle in laga soo musaafuriyay ama tarxiilay Puntland ayna ku dhibaateysanyihiin meelo ka tirsan gobolka Hiiraan ee dalka Somaliya. Arinaas oo runtii ah arin u baahan in baaritaan deg deg ah lagu suubiyo, dhibaatada loo geystay dhaliyada ganacsatada ah, dadkii ka dabeyyeyna lagula xisaabtabo ama laga qaado talaabada ku haboon. Waxaanse ka xumahay in inta badan hogaamiyeyaasha bulshadeena aysan ka hadlin!
Prof. Jawaari waxa uu kaloo sheegay in canshuurta laga ururiyo hooyada qoryaha gadata iyo dadka caadi ah ee ganastatada ee nolol maalmeedka la dagaalamaya, in aanan sidii ku habooneyd canshuurtaas logu adeegin bulshada u baahan ama u dhibaateysan.
In maammul la’aanta ka jirta inta badan dhulka koonfur gableed, ay tahay arin xunnuun ku haysto, isla markaasna waxaa i dhibayso in siyaasiyaan aan lahay hami iyo dareen dadninimo ama waddaninmo in ay qabtaan maamulka shacabka dhibaateysan ayuu yri Prof Jawaari.
Sidaa darteed, anigoo tixraacayaha qodobadaas qiimaha leh, waxaan talo ku soo jedinayaa talooyinka hoos ku qoran:
In la taageero baaqa cusub ee Prof. Jawaari, loona arko fursad kale, oo lagu badbaadiyo jiritaanka iyo wadajirka shacabaka koonfur galbeed.
in aanan lagu deg degin la sameeyo ama lagu dhawaaqo maamul aysan raali ka aheen shacabka koonfur galbeed iyo wadahadalka waqti la siiyo si loo helo isfaham bulshada dhexdeeda ah.
In wadahadal kasto lagu saleeyo in la xaqiijiyo marka hore dhulka iyo dhammaan xaquuqda dadka DM ee ku dhaqan dhamman lixda gobo ee koonfur galbeed.
In Siyaasiyiinta ay khilaafka meel iska dhigaa iyo in damacyada shaqsiyeed laga hor mariyo tan guud iyo in la helo taanaasul siyaasadeed oo dhab ah. Siyaasiyiinta doonaya jago, waa in ay kasbadaan rabitaanka shacabka, soona bandhigaan waxa ay ka gadayaan ama u qabanayaan shacabka.
In dhammaan qof alla qofkii wax ku so kordhinaayo maamul ku dhisan caddaalad iyo waxqabada laga qeybgeliyo maamulyada kala duwan ee bulshada.
In awooda oday dhaqameedyada Koonfur galbeed la mideeyo, horeyna loo sii horamariyo maamulka golaha guurtida ee koonfur galbeed oo hore u dhisteeen dhammaan odayaasha dhaqanka.
In xildhibaanada hadda ku jira Baarlamaanka ee koonfur galbeed , gaar ahan DM ay ka shaqeeyn lahaayeen, marka hore, sidii doorashada 2016 (waaba hadii ay dhacdeee), in tirada xildhibaanada ee hadda ah 61, ay u noqon laheyd labanlaab, oo aysan fiirinin fursadda keliya oo ay maanta haystaan. Ogaada Walaalayaal; doorashada 2016 waxaa lagu saleyn doonaa maamul goboleedyada iyo Axsaaab Siyaasadeed. Markaa idinkey idinjirtaa hadii aad dhammaantiin isku soo koobtaan Magaalada Baydhabo!
In lahelo wadashaqeyn dhexmarta dhamman aqoonyahanada iyo waxgaradka koonfur galbeed, kana qeybqaataan talooyinka ku aadan badbaadinta masiirka ummada koonfurgalbeed si firfircoon ah.
In si deg deg ah loo magacaabo gudi daba gala arimaha ku saabsan shacabka koonfur galbeed ee lagu dhibaateeyay Puntland islamarkaasna la helo dhammaan tirade dadkii ladhibaateyey iyo shaqsiyaadka ka dabmbeeyay dhibatooyinkaas.
Iyo in la helo barnaamij dib u dejin loogu sameeyo dadka ku jira xeryooyinka barakcayaasha meelo kala duwan ee Somaliya ka tirsan.
Waxaan ku soo gababeynayaa maqaalkeyga, in rabitaanka shacabka mar kasto u yahay furaha horumarka bulsho kasto oo ku nool aduunka guudkiisa.
Waxaana u rajeynayaa baaqa cusub ee uu soo jeediyay Prof. Jawaari inuu noqdo mid laga dhabeeyo laguna guulaysto, islamarkaasna lagu saleyndoona rabitaanka shacabka koonfur galbeed iyo in arimaha hadda taagan wadahadal lagu dhameeyo.
Xoghayaha Dallada Koonfur galbeed – Sweden
Ciidamada Kenya Oo Xabsiga U Taxaabay Gudoomiyaha Gudiga Difaaca Baarlamaanka Soomaaliya Xuseen Carab Ciise
Akhriso Bayaan Kasoo Baxay Golaha Guurtada Maamulka 6 da Gobol Ee Koonfur Galbeed Oo Looga Soo Horjeeda Shirkii Dib U Heshiisiinta Uu Ku Baaqay Prof. Jawaari, Islamarkaana Loogu Digay In Ra’iisal Wasare C/Weli Uu Yimaado Maglaada Baydhabo